ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင့်အွန်လိုင်း Social Profiles တို့၏ဆက်ဆံရေးငှာနေကြ?
အားဖြင့် KC မော်ဂန်
သင်နဲ့အလွန်အမင်းဖုန်တက်တူးရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုက်များနှင့် search engine များပေါ်တွင်၎င်းတို့၏ရက်စွဲများများအတွက်ရှာဖွေပေးသူကိုဦးတည်းသောပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးသိ, မှန်သော? သင်သည်သင်၏အင်တာနက်ခြေရာကိုသင့်ရဲ့အလားအလာဆက်ဆံရေးကိုသင်တို့ကို အကြောင်းပြု. ပြောနေတာလဲသိသလား?
သင်ဖြစ်နိုင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်နောက်လိုက်နောက်ပါစာရင်းများနှင့်အတူပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ရုံမည်မျှအနီရောင်အလံများ? သင်ထင်ထားသည်ထက်ပိုမိုဒီတစ်ခါလည်း. သင်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များ၏အများစုကိုအသုံးမပြုနိုင်အပိုင်းပိုင်းတစ်ခုမှာ, အနည်းဆုံးအင်တာနက်ကိုကြွလာသောအခါ, သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်. နိုင်သည့်အလားအလာ, ရက်စွဲများသင့်စာရင်းများကိုမှာရှာဖွေနေနှင့်အချို့တော်တော်လေးခိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်ဖွဲ့စည်းနိုင်.
သင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးစာရင်းကတဆင့်ကြည့်ရှုလျှင်လျှင်မြန်စွာ, အချက်အလက်အစိတ်အပိုင်းချက်ချင်းပဲစုပ်ယူပါလိမ့်မယ်: စာရင်းထဲမှာအမျိုးသမီးမှလူများ၏အချိုး. အထီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိသည်သောမိန်းမတို့အလားအလာရက်စွဲများမှခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါတယ်. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဒီလူတွေနေသောတွေးမိတာပေါ့, အဘယ်ဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်, နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသည်ဟုခံစားရ. တူညီသောလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာလူထွက်စစ်ဆေးနေကြသူအမျိုးသမီးများအတွက်ဝင်. သူတို့စာရင်းထဲမှာအမျိုးသမီးတွေအများကြီးမြင်သောအခါ, သူတို့ကစပ်စုနှင့်ပိုပြီးသတိကြီးစွာဖြစ်ရလိမ့်မယ်.
သင် Reveal အဆိုပါ Info
လူမှုမီဒီယာထိတွေ့ထားဖို့ကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်၏နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသင်ခံစားပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ချိတ်ဆက်, ဒါပေမယ့်လည်းပူ-button ကိုအကြောင်းအရာအသစ်များနှင့်ပြည့်စုံင်. လူအတော်များများကသူတို့ကိုအရေးပါသူများနိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးအကြောင်းတရားများကိုလိုက်နာရန်လူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များကိုအသုံးပြု. အချို့ကပင်၎င်းတို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အကျိုးစီးပွား tout ဖို့ soapbox အဖြစ်အသုံးပြုရန်. ကြံ့ခိုင်မှုရှိတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်အလွန်အလားအလာရက်စွဲများမှ off-ချပြီးရနိုင်, အဘယ်သူသည်စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့တိုင်းပြဿနာနှင့်အတူသဘောတူမည်မဟုတ်.
ဒါဟာတိုင်းတစ်ခုတည်းပြဿနာအပေါ်သင်နှင့်အတူသဘောတူသောသူတစ်ဦးအိမ်ထောင်ဖက်ရှာတွေ့မှစံပြမဖြစ်, ဒါကြောင့်ပွင့်လင်းစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အမြဲပိုကောင်းင်. သင်သည်သင့်နိုင်ငံရေးအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူအလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်တရစပ်လိုက်တဲ့အခါ, သင်ပင်ဘုံမြေပြင်ကိုရှာဖွေရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ရှေ့၌သင်တို့သူတို့ကိုပယ်လှည့ ်. ထိုသူတို့ကိုပယ်သွားတွန်းအားပေးနိုင်.
သင် Make မေတ္တာရပ်ခံချက်
သင်၏နှစ်ဦးတို့တစ်ပတ်လောက်ချိန်းတွေ့ခဲ့ကြ, ကိုကျန်းမာယ့်. သင်တို့မူကား၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေစာရင်းကတဆင့်ဘီးနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုနှင့်အတူသူတို့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အသိအကျွမ်းတွေအားလုံးကိုတရစပ်မီ, ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်စဉ်းစား. ဒါဟာသူတို့ရဲ့မောင်နှမမိတ်ဆွေရန်သင့်လျော်မယ့်, မိဘများနှင့်အထက်တန်းကျောင်း buddies တွေအဖြစ်သင်ဖော်ပြအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ကိုမေးမဟုတ်လျှင်.
သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့နောက်ကျောသို့မဟုတ်သူတို့၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲလုပ်ပါ, သင် stalker တူရှာဖွေနေတက်လေနိုင်. သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလုံးဝအပြစ​​်ကင်းသောတောင်စဉ်အခါ, ရုတ်တရက်သင်သည်သူတို့၏မိတ်ဆွေများအားလုံး friending ဆိုရင်အဲဒါကိုမသင်္ကာကြည့်ရှုမယ့်. သင်ချိန်းတွေ့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်သည်ထိုသူတို့အပေါ် tabs ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်သည်ဟုခံစားရပါလိမ့်မယ်, ဤယုံကြည်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအမျိုးမျိုးမြှင့်နိုင်.
သင်တို့ရှိသမျှသည်ဆောင်းတွင်း dieted နှင့်ယခုသင်တို့ကိုအမှတ်တံဆိပ်အသစ် swimsuit အတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုကြည့် ... ဒါပေမယ့်သင်ကကမ္ဘာကြီးကိုအတူဝေမျှသင့်တယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူး. သင်သည်သင်၏ဓါတ်ပုံများတွင်ထုတ်ဖေါ်ဥစ္စာသင်မည်သူတစ်ဦး၏အဘယ်သို့သောအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်. မှားယွင်းသောထင်မြင်ချွတ်ပေးကမ်းလိမ့်မည်. အရေပြားတွေအများကြီးကိုချွတ်ပြရန်, နှင့်သင့်အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်ကိုမနာလိုဖြစ်လာနိုင်. သူတို့သည်သင့်အဘို့အရိုသေလေးစားမှုကိုဆုံးရှုံးနိုင်. သူတို့ကပင်အခြားလူများထံသို့သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုပြသနိုင်, သို့မဟုတ်ထိုသူတို့အားပြန်လည်ထုတ်ဝေနှင့်ကမ္ဘာသူတို့နှင့်အတူမျှဝေ, သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့အနည်းငယ်နှင့်အတူ Pics မျှဝေဖို့သာဆန္ဒရှိသောအခါ.
အကယ်လို့အင်တာနက်ပေါ်တွင်တစ်ခုခုကိုတင်ပြီးတာနဲ့, အဘယ်သူမျှရနိုင်ပါနှင့်လူတိုင်းအကြောင်းကိုထင်မြင်ယူဆချက်ဖွဲ့စည်းစေမည်. သင်သည်ထို swimsuit ရိုက်ချက်ကတော့ချွတ်ပြသမီတော်မူကြောင်းသတိရပါ.
သင်လူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ကပ်ဘယ်လိုပြုစုစောင့်ရှောက် ယူ.. သင်လည်းဘာမှအများကြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးမဖြစ်ချင်ကြဘူး. သင်ကအိပ်ရာပေါ်ကူးမြောက်ပါတယ်ရှိရာအရပ်၌သင်တို့ကိုချစ်သောသူသင်၏ goofy ရုပ်ပုံလွှာသင့်အဘို့အကြီးမြတ်အမှတ်တရများမီးပွားချရန်နိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အလားအလာရက်စွဲကြောင့်ကြီးမားတဲ့အနီရောင်အလံဖြစ်နိုင်. သင်သည်ထိုသို့သောအပြုအမူအတိတ်တွင်ကောင်းစွာကြောင်းရှင်းပြဖို့အခွင့်အလမ်းရဖို့ဘယ်တော့မှမစေခြင်းငှါ.
သင့်ရဲ့စရိုက်ကိုအွန်လိုင်းပြရန်, ဒါပေမယ့် filtered version ကိုပြသ. သင်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုချစ်သောသူအိမ်ထောင်ဖက်ရှာလို, သင်နဲ့အများကြီးအလွှာထုတ်ဖေါ်ဖို့အများကြီးအခွင့်အလမ်းကိုရလိ​​မ့်မည်ဟု. အကယ်လို့အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိသမျှကိုသင်၏အသွင်အပြင်ကိုချွတ်ပြသနိုင်ဖို့အလျင်စလိုရန်မလိုပါ.